2 Kubatsirwa kwatinoitwa naJehovha kunopfuura nekure chaizvo kubatsirwa kwaiitwa vanhu nezvikwangwani izvi. Jehovha anoita seakamira pamberi pevanhu vake achivanongedzera kuti iyi ndiyo nzira inoenda kuupenyu husingaperi, kusina njodzi. Uyewo Jehovha anotoita semufudzi ane rudo anenge achishevedza makwai ake achiatungamirira uye achiadzivirira kuti asaenda netunzira tune njodzi.​—Verenga Isaya 30:20, 21.
4 Mumazuva aNoa, Mwari akapa mirayiro yakazoita kuti vanhu vapone. Mafashamo paakapera Jehovha akapa mutemo wakajeka panyaya yeropa. Chii chakaita kuti mutemo iwoyo upiwe? Zvinhu zvakanga zvachinja. Jehovha akanga ava kubvumidza vanhu kuti vadye nyama, saka paidiwa mitemo mitsva. Mwari akati: “Nyama bedzi ine mweya wayo​—iro ropa rayo—​musaidya.” (Gen. 9:1-4) Kuchinja uku kwakanga kwaita zvinhu kwakaratidza maonero anoita Mwari upenyu. Sezvo ari Musiki uye ari iye akatipa upenyu, ndiye ane kodzero yekutipa mitemo pamusoro peupenyu. Somuenzaniso, akapa mutemo wekuti vanhu vasauraya vamwe. Mwari anoona upenyu uye ropa sezvinhu zvitsvene, uye munhu asingakoshesi upenyu neropa achazvidavirira.​—Gen. 9:5, 6.
6 Mumazuva aMosesi, pakanga pava kudiwa mirayiro mitsva pamararamiro nemanamatiro aifanira kuita vaIsraeri. Nei paidiwa mimwe mirayiro? Zvinhu zvakanga zvachinja zvakare. Kwemakore anopfuura 200, vazukuru vaJakobho vaigara muIjipiti, nyika yakanga yakazara vanhu vainamata vakafa, zvidhori, uye vanhu ivavo vaiitawo dzimwe tsika dzakaipa dzinovengwa naMwari. Saka vanhu vaMwari pavakasunungurwa kubva muIjipiti, paidiwa mirayiro mitsva. Vanhu vaMwari vakanga vasisiri nhapwa, asi vakanga vasunungurwa uye vava pasi peMutemo waJehovha. Mamwe mabhuku anoti muchiHebheru shoko rekuti “mutemo” rinobva pashoko rine pfungwa “yekuratidza munhu nzira, kutungamirira, kana kuti kurayira.” Mutemo waMosesi wakanga wakaita serusvingo rwaidzivirira vanhu vaMwari kubva patsika dzakaora dzemamwe marudzi uye pazvitendero zvenhema. VaIsraeri pavaiteerera Mwari, vaikomborerwa. Pavairega kumuteerera, zvinhu zvaivaomera.​—Verenga Dheuteronomio 28:1, 2, 15.
7 Paiva nechimwe chikonzero chakaita kuti pave neMutemo. Mutemo waMosesi wairatidza kuti pane chimwe chinhu chinokosha chaizoitika chaiva nechekuita nekuzadziswa kwechinangwa chaJehovha. Jesu Kristu akanga achizouya panyika pano saMesiya. Mutemo uyu wakaita kuti zvinyatsova pachena kuti vaIsraeri vaiva nechivi. Wakaitawo kuti vanyatsoona kuti paidiwa rudzikinuro, chibayiro chakakwana chaizonyatsofukidza chivi. (VaG. 3:19; VaH. 10:1-10) Uyewo Mutemo wakabatsira kuchengetedza dzinza raizouya naMesiya uye wakabatsira kuti vanhu vamuzive paakasvika. Saka Mutemo waMosesi wakanga wakaita ‘semuperekedzi,’ uchitungamirira kuna Kristu.​—VaG. 3:23, 24.
8 Isuwo vaKristu tinogona kubatsirwa neMutemo wakapiwa vaIsraeri. Tinobatsirwa sei? Tinogona kumbomira totarisa zvidzidzo zviri muMutemo waMosesi. Kunyange zvazvo tisisiri pasi pemitemo iyoyo, mizhinji yacho inogona kutibatsira muupenyu hwedu uye pakunamata Mwari wedu mutsvene, Jehovha. Mitemo iyoyo yakanyorwa muBhaibheri kuitira kuti tiwane zvidzidzo pairi, toshandisa zvatinenge tadzidza muupenyu hwedu uye kuti tikoshese zvakadzidziswa naJesu izvo zviri nani kupfuura mutemo iwoyo. Somuenzaniso, Jesu akati: “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Usaita upombwe.’ Asi ini ndinoti kwamuri, munhu wose anoramba akatarira mukadzi zvokuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.” Saka pane kungorega kuita upombwe, hatitombofaniri kurega chido chekuda kuita unzenza hwepabonde chichikura matiri.​—Mat. 5:27, 28.
10 Pakatanga chiKristu, vanhu vakapiwa mimwe mitemo mitsva yairatidza manamatiro nemararamiro avaifanira kuita. Vashumiri vaMwari ivavo vakatendeka vakanga vava pasi pesungano itsva. Mutemo waMosesi wakanga wakapiwa kurudzi rwaIsraeri chete. Asi Israeri waMwari aizoumbwa nevanhu vanobva kumarudzi akawanda uye mararamiro akasiyana-siyana. Izvi zvinonyatsoratidza kuti “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mab. 10:34, 35) VaIsraeri pavaiva Munyika Yakapikirwa vaibatsirwa neMutemo waMosesi waiva pamatombo akavezwa. Asi Israeri waMwari, aitungamirirwa ‘nemutemo waKristu’ wakanyorwa pamwoyo. “Mutemo waKristu” waizobatsira vaKristu pasinei nekwavanogara.​—VaG. 6:2.
13 Iye zvino ngatichiongororai “murayiro mutsva” watakapiwa naJesu uyo unobatsira kuziva mabatiro atinofanira kuita vatinonamata navo. (Verenga Johani 13:34, 35.) Murayiro uyu haugumiri pakuda hama dzedu kana zvinhu zvichifamba zvakanaka, asi tinofanirawo kudzida zvekutosvika pakudzifira. Izvi zvakanga zvisingataurwi muMutemo waMosesi.​—Mat. 22:39; 1 Joh. 3:16.
14 Jesu ndiye akaratidza rudo irworwo kupfuura vamwe vanhu vese. Ainyatsoda vadzidzi vake. Aivada zvekuti akatozvipira kuvafira. Aitarisira kuti vadzidzi vake vadanane saizvozvo uye anotarisirawo kuti isu tidaro. Dzimwe nguva tinotofanira kupinda nemumatambudziko tichiitira hama dzedu dzechiKristu, kunyange kutodzifira.​—1 VaT. 2:8.
20 Vanhu vachateerera ‘zvinhu zvakanyorwa mumipumburu’ vachararama nekusingaperi. Mazita evaya vacharamba vakatendeka kuna Mwari pamuedzo wekupedzisira achanyorwa naJehovha ‘mumupumburu woupenyu’ uye haazodzimwi. Nesuwo mazita edu anogona kunyorwa zvekusazodzimwa! Saka tinofanira KUMIRA kuti tiverenge Shoko raMwari, TOTARISA zviri muBhaibheri kuti tirinzwisise, uye TOTEERERA zvatiri kuudzwa naMwari iye zvino. Kana tikaita zvinhu izvi tichapona pakutambudzika kukuru, uye tichararama nekusingaperi tichinakidzwa nekudzidza nezvaMwari wedu ane rudo uye ane uchenjeri, Jehovha.​—Mup. 3:11; VaR. 11:33.